Indlela yokuhlukanisa izinwele zakho ngokuvumelana nesimo sobuso bakho – SL Raw Virgin Hair LLC.
Indlela yokuhlukanisa izinwele zakho ngokuvumelana nesimo sobuso bakho
Uke wenza ingxenye eseceleni futhi wacabanga, nah lokho akubukeki kulungile? Mhlawumbe bekuyingxenye emaphakathi kuwe futhi isithombe besingathopha neze.
Kodwa-ke, ngenkathi uzama uhlobo oluhlukile lwengxenye, izinwele zakho zezinwele zibukeka zinhle?
Lokho kungenxa yokuthi ugcine uhlukanise izinwele zakho ngokuma kobuso bakho.
Uma kwenziwa kahle, ingxenye yakho ingaholela ekulungiseni izinwele ezithopha kakhulu.
Ngakho, nazi izinto ezimbalwa okufanele uzicabangele ukuze ukwazi ukuhlukanisa izinwele zakho ngokuma kobuso bakho.
Izinhlobo zomumo wobuso
Ukuze uthole ingxenye efanelekile yomumo wobuso bakho, udinga ukuqonda ukuthi unamuphi umumo. Nazi izimo zobuso ezingu-6 ezidume kakhulu.
Manje, ake singene ezinhlotsheni zezingxenye ezihambisana kangcono nesimo sobuso bakho.
Uzihlukanisa kanjani izinwele zakho ngokuya ngesimo sobuso bakho
1. Izingxenye zezinwele zobuso obuyindilinga
Uma unobuso obuyindilinga, ukubheja kwakho okuhle ukwenza ingxenye emaphakathi. Noma ungenza ingxenye ejulile eseceleni. Inzuzo yazo zombili lezi zingxenye ukuthi zinikeza inkohliso yokwandisa ubuso bakho. Lokhu kudala uhlobo lokulinganisa ebusweni bakho. Ingxenye ejulile eseceleni yengeza ivolumu phezulu kwekhanda lakho okwenza ubuso bakho bubonakale bude.
Isibonelo esihle salokhu kuwigi kungaba u-Shai wethu othandekayo, iwigi 18” kinky straight lace closure enengxenye emaphakathi.
2 Izingxenye zezinwele zobuso obumise okwenhliziyo
Uma unobuso obumise okwenhliziyo, uzodinga ukuthola izinwele zezinwele ezithambisa izihlathi zakho futhi ziphule umugqa wesilevu. Isitayela esingcono kakhulu esinengxenye eyenza kokubili sisuke kancane phakathi nendawo - ingxenye ejulile eseceleni.
3. Izingxenye zezinwele zobuso obuyisikwele
Uma unobuso obuyisikwele, ungase ufune ukungeza ukuthamba kancane emhlathini wakho nasesilevuni. Ungakwazi ukufeza lokhu nge-swoop noma ingxenye eshanele eceleni ngama-bangs. Ungakwazi futhi ukucabangela ingxenye eseceleni ebumbeka ngobumnene ubuso.
Isibonelo, i-Diamond, 20” iwigi yethu yangaphambili ye-wavy ye-lace enengxenye eseceleni kanye ne-side-swept lay ingahlangabezana nazo zonke izindlela zokwengeza ukuthambile kumumo wobuso obuyisikwele.
4. Ingxenye yezinwele engcono kakhulu yobuso obumise okwedayimane
Ama-bangs ngeke asebenze kahle ngobuso bedayimane. Nokho, ingxenye eseceleni (nezinwele zezinwele ezimfushane) igqamisa ngempela ubuhle bobuso bakho njengoba ihambisana kahle nezihlathi zakho.
5.Izingxenye zezinwele zobuso obuyiqanda
Uma ubuso bakho bumise okweqanda, ube nenhlanhla yokudweba Cishe noma iyiphi ingxenye ihlala kahle naleyo mumo. Ngakho-ke, gqoka ukubukeka okuthandayo noma ngabe kuyingxenye ephakathi, isitayela esishanele eceleni noma ingxenye ejulile. Ngakho-ke, zizame futhi ubone ukuthi iyiphi oyithandayo.
6. Ingxenye yezinwele ezinhle kakhulu zomumo wobuso obuyi-oblong
Ingxenye eseceleni enezinwele ezinyakazayo kancane esiphongweni yenza kahle ngobuso obuyi-oblong njengoba inikeza inkohliso yokuthamba futhi izungeza ubuso bakho. Ungakwazi futhi ukubalekela ama-bangs ngesizathu esifanayo kanye neqiniso lokuthi asiza ukufinyeza ukuma kobuso bakho.
Ngakho-ke, uma ubulokhu unyakazisa izinwele zezinwele ezifanayo noma isitayela sewigi iminyaka, kungani ungaboni ukuthi yini ekusebenzela kangcono ukuma kobuso bakho bese uzama leso sitayela.
SL Raw Pro Tip: Kuyafana nakumawigi akho. Ngakho-ke, ngokuzayo uma u-oda iwigi, hlola ukuthi ihlukaniswa kanjani uma kuyintambo engaphambili yeleyisi, bese ukhetha evumelana kangcono nokuma kobuso bakho.
Tags: beauty, Beauty blogger, beginners guide, face shape, hair education, hair parting guide, hair style guide, Hair talk, hairstyling tips, heart face shape, oval face shape